KUTUSWE AMAGALELO OMNTWANA UMAGOGO - Ilanga News
Home Izindaba KUTUSWE AMAGALELO OMNTWANA UMAGOGO
UMNTWANA waKwaPhindangene iNkosi uMangosuthu Buthelezi neSilo uMisuzulu kwethulwa umcimbi wokuqhakambisa amagalelo kaMntwana uMagogo.
ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE
ISWELE imilomo eyizinkulungwane iNdlunkulu kaZulu ngokuqhakanjiswa kwamagalelo oMntwana uMagogo kaDinuzulu, emcimbini obungoLwesihlanu, eMpangeni, wokwethulwa ngokusemthethweni kwefestival yomculo wamakhwaya eqanjwe ngaye. Le festival isungulwe wuMasipala iKing Cetshwayo. UNdunankulu kaZulu ozalwa nguyena uMntwana uMagogo uMntwana uMangosuthu Buthelezi neSilo uMisuzulu Zulu, ba-the okwenziwe yiMeya yaseKing Cetshwayo, uMnu Thamsanqa Ntuli, kusho lukhulu ezinhliziyweni zasendlunkulu.
UMnu Ntuli uveze ukuthi phezu kwalo mcimbi waminyaka yonke wokuhlonipha uMntwana uMagogo, bazokwakha nesikhungo somculo eKing Cetshwayo esizoqanjwa ngaye kulo nyakamali ozoqala [ngoNtulikazi (July)]. Uthi lesi sikhungo basabele uR10 million. “UMntwana Omkhulu uMagogo unezindondo ngalo mculo. Wakwazi ukuwumela, eqhakambisa ulimi nesiko lakithi. “Ngakhoke, sizimisele ukuqhakambisa igama lakhe, silihloniphe ngendlela efanele. Ngonyaka ozayo lo mcimbi wamakhwaya sizowunyusela (isabelo) ngo-R1 million, ngoba sifuna ubesezingeni eliphezulu. Ngo-2024 kuyofanele lo mcimbi uthathwe wuhulumeni wesifundazwe, kodwake lokho kuyokwenzeka uma kuthathe thina (IFP),” kusho uMnu Ntuli.
Uveze nokuthi nomfuziselo woMntwana uMagogo uzokwakhiwa khona eKing Cetshwayo. Ukhale ngokuthi kuningi okungahambi ngendlela efanele eku-qhakambiseni amagugu aKwaZulu, ekubeni uhulumeni uphethwe ngabantu abamnyama. “Ngaphambi kuka-1912, amakhosi aye-seqalile ukulwela izwe nokuhlonipheka kwesihlalo sobukhosi. UMntwana waKwaPhindangene (iNkosi Buthelezi), wabulwela ubukhosi, kuyasikhathazake uma sibona imithetho ekhona ingacacisi ngodaba lwamakhosi, ekubeni ebulawa usuku nosuku. “Siyathemba ukuthi ngo-2024, uNkulunkulu uzosipha amandla okulungisa konke okonakele. Abaholi bezwe kufanele bakhombise ngezenzo ukuthi sekuphethe umuntu omnyama, okwethu kubuyele kuthina. INkosi Buthelezi ithe ijabule kakhulu ngokuhlonishwa kukanina, ngoba umsebenzi wakhe ubonakale ngisho nase-USA. “Akusikhona ukuthi ngibonga ngoba kungumama, kodwa ngibonga ngokwazi umlando womculo wakhe ephakamisa isizwe samaZulu,” kusho iNkosi Buthelezi. ISilo, sithe eNdlunkulu kaZulu akuphindanga kwabakhona ofana noMntwana uMagogo ngokwesiphiwo somculo.
Previous articleBatoyizele u-principal “opotoza abafundi”
Next articleKuboshwe iphoyisa lesifazane “elidubule labulala umngani”